“Weligay ma Xannuunsan intii aan Madaxweynaha ahaa!” | Maankaab.com
“Weligay ma Xannuunsan intii aan Madaxweynaha ahaa!”
Yoweri Musavani oo 31 sanno Madaxweyne ka ahaa dalka Uganda
Kampala (MK/W.Wararka)- Madaxweynaha dalka Uganda Mr. Yoweri Musavani oo sii gaboobaya ayaa sheegay in waligiis aannu xannuunsan muddo 31 sannadood ah oo uu madaxweyne ahaa.
“Waligaa miyaad maqashay Musaveni ayaa xannuunsaday oo cusbtitaal yaalla, 31kii sanno ee la soo dhaafay? Maxaa yeelay waxaan raacaa xeelado caafimaad, taas oo ugu dambeystii iga caawisay ka-hortagga cudurrada. Qaybo badan oo xannuunada ka mid ah waa laga hortagi karaa,” ayuu yidhi Mdaxweyne Musavani oo hadal kooban u jeediyey golaha xukuumaddiisa maalintii Isniinta ee toddobaadkan.
Hadalka ka soo yeedhay Madaxweynaha Uganda, ayaa dad badan ula muuqda layaab marka loo eego muddada nus-qarniga iyo dheeraadka ah ee Yoweri Musavani hoggaaminayey dalkaas ku yaal bariga qaaradda Afrika.
Dhinaca kale, tirada madaxweyneyaasha dalalka Afrikaanka ee xannuunada la daalaa-dhacaya, a ayaa kor u kacday sannadkan oo keliya.
Madaxweynaha Nigeria Mr. Muhammadu Buhari, ayaa muddo dheer u jooga magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska daweynta xannuun aan noociisa weli la shaacin. Sidoo kale, Madaxweynayaasha waddamada Angola, Zimbabwe, Benin iyo Algeria ayaa safarro caafimaad ugu baxay dalka dibaddiisa sannadkan 2017.
Hoggaamiyaha ugu da’da weyn caalamka oo ah Madaxweynaha Zimbabwe Mr. Robert Mugabe oo talada dalkaasi qabtay 1980kii, ayaa axsaabtu ku doodaan inuu dalka ka maamulo sariirta cusbitaal ;a sheegay inuu jiifay dhowrkii sannadood ee u dambeeyey, kadib markii uu saddex jeer safarro caafimaad ku tagay waddanka Singapore lixdii bilood ee u horreeyey sannadkan.